छताछुल्ल भयो ओलीको राष्ट्रवाद, नेपाली चलचित्रलाई फुटेको कौडी नदिने भारतीयलाई अरबौं ! - नेपालबहस
छताछुल्ल भयो ओलीको राष्ट्रवाद, नेपाली चलचित्रलाई फुटेको कौडी नदिने भारतीयलाई अरबौं !
काठमाडौं । राष्ट्रवादको छद्म नारा उरालेर नेपाली जनताको भावना जित्न सफल थिए, कुनै बेला एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली । २०७२ साल वैशाख १२ गते नेपालमा गएको विनाशकारी भुइँचालोले जनमानस त्राहिमामको अवस्थामा थियो । जताततै अन्योल र अभावले नेपालीजनको मन कुँढिएको थियो ।
ठीक त्यही बेला अर्थात २०७२ असोज ३ गते संविधानसभाले नेपालको संविधान जारी ग¥यो । उक्त संविधानलाई मधेसवादी पार्टीले रुचाएका थिएनन् । त्यसैले भारतले संविधान तत्काल जारी नगर्न नेपालका प्रमुख दल र नेतालाई आग्रह गरिरहेको थियो । त्यसको नेतृत्व गर्दै भारतीय विदेश मन्त्रालयका तत्कालिन सचिव एस जयशंकर नेपाल आएका थिए । निकै मेहनत गर्दा पनि जयशंकरको आग्रहलाई नेपाली नेताहरुले स्वीकारेनन् । कांग्रेस सभापति सुशील कोइराला प्रधानमन्त्री थिए । उनले पनि भारतीय प्रस्तावलाई मान्न सकेनन् । अनि प्रतिक्रिया स्वरुप भारतले लगाई दियो – अघोषित नाकाबन्दी । नाकाबन्दीको चर्काे विरोध भयो ।
ओलीले नेपाल र नेपाली भाषा , साहित्य र संस्कृति संबद्र्धनमा कुनै चासो दिएका छैनन् । तर भारतीय चलचित्रमार्फत नेपाली भाषा, साहित्य र संस्कृतिलाई अतिक्रमण गर्ने वातावरण भने तयार गरिदिएका छन् । नेपाली चलचित्र क्षेत्रमा लामो योगदान दिएका कलाकार , निर्माता एवं सरोकारवालाहरुलाई सम्मान गर्न विगतदेखि नै सरकारले कञ्जुस्याईं गर्दै आएको छ ।
प्रतिपक्षमा रहेका ओलीले चर्काे भाषण गरे भारतविरुद्ध । नेपाली जनताले वाहवाह गरिदिए । त्यसैको बलमा उनले ०७४ सालको आम निर्वाचनमा वहुमत पाए र अहिले शासन गर्दै छन् । तर सत्ता सम्हालेको डेढ वर्ष नवित्दै उनको नक्कली राष्ट्रबादको मुखुण्डो च्यात्तिएको छ । इतिहासमै नभएको र नगरिएको एउटा निर्णय उनको सरकारले गरेको छ । त्यो हो – भारतीय चलचित्रको अन्तर्राष्ट्रिय अवार्ड वितरण नेपालमा गर्ने र त्यसका लागि सरकारले नै एक अर्ब रुपैयाँ अनुदान दिने ।
धेरैलाई थाहा थियो ओलीको सक्कली अनुहार । उनी सधैं भारतीय संस्थापन पक्षको मोहरा मध्यका एक हुन् भन्ने एमाले वृत्तमा चर्चामा थियो र छ । चाहे एमालेकालमा होस् वा नेकपा आवरणमा । मात्र उनलाई सहजै सत्तामा पु¥याउन नक्कली राष्ट्रवादीको चोला पहि¥याउनु थियो भारतीय पक्षले । समय आएपछि आफ्नो सेवा गर्नेमा उनीहरु ढुक्क थिए । नभन्दै इन्टरनेशनल इण्डिया फिल्म अवार्ड अर्थात आईफाको नयाँ संस्करण काठमाडौंमा गर्न मन्त्रिपरिषदबाटै स्वीकृति दिए ओलीले । साथै एक अर्ब रुपैयाँको आर्थिक सहयोग समेत गर्ने निर्णय गराए ।
उनको यो निर्णयले नेपाली चलचित्रको हुर्मत लिने काम गरेको छ । त्यसै पनि नेपालमा बलिउड फिल्मको बोलबाला भएका बेला आईफा आयोजनाले नेपालको भाषा , संस्कृति र पहिचानमा ठूलो चोट लाग्ने छ । भारतीय चलचित्रको अतिक्रमणले थला परेको नेपाली चलचित्र क्षेत्र थप मारमा पर्ने छ । साथै यसले नेपाली राष्ट्रियतालाई समेत कमजोर बनाई दिने छ ।
समितिमा नेपाल सरकारका पाँचवटा मन्त्रालयका सचिवलाई सदस्य बनाइएको छ । यसबाट पनि ओली सरकार आईफालाई कति महत्व दिंदै छ भन्ने पुष्टि गर्छ । बडाे गर्वका साथ उनी नेपाल सरकार भारतीय चलचित्र उद्योगको प्रवद्र्धन गर्न लागिपरेको बताउँदै थिए । यसैबाट पनि प्रष्ट हुन्छ ओली सरकारको राष्ट्रियता ।
गएका वर्षहरुमा यस्ता कार्यक्रम गर्न नेपाल चलचित्र विकास वोर्डले ताकेता गरेपनि राष्ट्रपतिले समय उपलव्ध नगराउँदा त्यसै थन्काइएको छ । अर्कातिर नेपाली चलचित्र क्षेत्रलाई फुटेको कौडी सहयोग नगर्ने ओली सरकार भारतीयलाई भने उदारमनाका साथ अर्ब रुपैयाँ खर्च गर्न तयार भएको छ । यसले ओलीको नक्कली राष्ट्रवाद छताछुल्ल बनाइदिएको छ । ऐन मौकामा ख्वामितको सेवा गर्ने दायित्वबाट ओली चुकेनन् ।
के हो आईफा फिल्म अवार्ड ?
भारतीय चलचित्र क्षेत्र बलिउडको चर्चित कार्यक्रम हो आईफा अर्थात इन्टरनेशलन इण्डिया फिल्म अवार्ड । वर्षभरि बलिउडमा निर्मित चलचित्रको मूल्याङकन गरी विभिन्न विधामा पुरष्कृत गर्ने काम गर्छ आईफाले । नेपालमा यस्तो कार्यक्रम हुनु आफैंमा नराम्रो नहोला । तर सरकारले नै एक अर्ब रुपैयाँ खर्च गरेर आयोजना गर्नु चाहिं राष्ट्रियतामाथि गम्भिर प्रहार हो । किनभने सरकारबाटै विदेशी कार्यक्रमलाई यति धेरै रकम उपलव्ध गराउने काम यसअघि कसैले गर्न सकेका थिएनन् ।
भारतीय चलचित्र क्षेत्रका धेरै कलाकारहरु सहभागी हुने उक्त कार्यक्रमले पर्यटन व्यवसायलाई थोरै सघाउ पुगेपनि राष्ट्रियता भने ध्वस्तै हुने अवस्थामा छ । नेपाली चलचित्र क्षेत्रको विकास र विस्तारमा कुनै चासो नराख्ने सरकारले आईफालाई यति धेरै महत्व किन दियो ? धेरैलाई चकित बनाइदिएको छ ।
आगामी अगष्टमा यो कार्यक्रमको आयोजना हुँदैछ । गएको विहिबार नेपाल सरकारका प्रवक्ताले नियमित पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्रिपरिषदको निर्णय सार्वजनिक गर्दै भने – हामी भारतीय चलचित्र जगतकाे ठूलो इभेण्टको आयोजना गर्दे छौं । अर्थात आईफा आयोजना गर्न संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन राज्यमन्त्री धनबहादुर बुढाको संयोजकत्वमा उच्चस्तरीय समिति बनाइएको छ । समितिमा नेपाल सरकारका पाँचवटा मन्त्रालयका सचिवलाई सदस्य बनाइएको छ । यसबाट पनि ओली सरकार आईफालाई कति महत्व दिंदै छ भन्ने पुष्टि गर्छ । बडाे गर्वका साथ उनी नेपाल सरकार भारतीय चलचित्र उद्योगको प्रवद्र्धन गर्न लागिपरेको बताउँदै थिए । यसैबाट पनि प्रष्ट हुन्छ ओली सरकारको राष्ट्रियता ।
नेपाली चलचित्र उद्योग थला परेको छ , तर सरकारी संयन्त्र भने भारतीय चलचित्रको उत्थानलाई आफ्नो कर्तव्य ठानिरहेको छ । साथै उक्त कार्यक्रमको सहआयोजना काठमाडौं महानगरपालिकाले गर्ने भएको छ भने नेपाल पर्यटन बोर्डलाई सहआयोजक बनाइएको छ । कार्यक्रम नेपालको सुरक्षा निकायको मुख्यालय रहेको आर्मी हेडक्वार्टरसँगैको मैदानमा गरिने छ । नेपालको सबैभन्दा संवेदनशील थलोमा भारतीयहरुको कार्यक्रम गर्न तयार ओली कस्ता राष्ट्रवादी हुन् भावी दिनमा उनका अरु पाटाहरुको पटाक्षेप हुने नै छ ।
आईफा फिल्म अवार्ड
अघिल्लो लेखलुट्न सके लुट कान्छा प्रधानमन्त्री रोजगारमै छ यस्तो छुट !
अर्को लेखनेपाल धितोपत्र बोर्डले वित्तीय साक्षरता अभिवृद्धिका लागि अन्तराष्ट्रिय सम्मेलन गर्दै
नेकपाको पार्टी एकीकरणले पायो पूर्णता, अनुशासन आयोगमा अमृतकुमार बोहरा
मन्त्रिपरिषद पुर्नगठनको तयारी, आज सचिवालय बैठक बस्दै
प्रधानमन्त्री ओलीलाई सुशासन समितिले कालापानीबारे छलफल गर्न बोलायो
महानगरपालिकाले नयाँ विद्यालय सञ्चालनका लागि अनुमति नदिने